श्रीमानलाई खुसी बनाउने यस्ता १० टिप्स् ! - Babal Khabar
आफ्नो श्रीमानलाई खुसी राख्नकाे लागि हरेक विवाहित महिलाको चाहना हुन्छ ।
तर कतिपय कारण र श्रीमानको भावनालाई बुझ्न नसक्दा श्रीमतीले श्रीमानलाई खुसी पार्न सकिरहेका हुँदैनन् ।यस्तो अवस्थामा श्रीमती श्रीमान्लाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने बिषयमा निकै चिन्तित भेटिन्छन् ।
१० यस्ता टिप्सहरु, जसकाे उपयाेगले श्रीमानलाई खुसी बनाउँन सकिन्छः जान्नुहाेस्,र हेर्नुस यो तलको भिडियो,
– एक्लै योजना नबनाउनुहोस् स् हरेक मानिसले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । तर स्वतन्त्रताको नाममा बिना सल्लाह एक्लै निर्णय लिने बानीले तपाईंलाई श्रीमानबाट टाढा बनाउन सक्छ । तसर्थ कुनै पनि योजना बनाउनु अघि श्रीमानसँग अनिवार्य सल्लाह लिएमा यसले श्रीमानलाई खुसी पार्न सक्छ । यस्तै यो पनि तपाई आफुलाई मन परेको मान्छेको प्यारो बनाउन चाहानुहुन्छ ?
ति मध्ये केही टिप्सहरु यस प्रकार छन्; १. उसलाई आफु तर्फ आकर्षित गर्ने पहिले तरिका हो, उसको आँखामा लगातार केही समयसम्म हेरीरहनु ।
यो केटा र केटी दुवैको लागी लाभदायक हुन्छ किनकी दुवै चाहान्छन् कि कोही आफुलाई राम्रो ठानेर हेरीरहोस र आफु प्रती उसको ध्यान आओस ।२. एक साधारण मुस्कानले तपाईले भन्न नसकेको धेरै कुरा भनिदिन्छ त्यसैले उसको अगाडी पर्डा सधै सुन्दर मुस्कान दिन नबिर्सनुहोला । बुलबुल पोस्टबाट साभार गरियको खबर ।
Prevदही खाने गर्नुभएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला, यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर ! डाक्टरको भनाइ यस्तो छ
nextनिद्रा नलागेर राति छटपटी भयो ? सुत्नुअघि श’रीरको यो भाग दबाउनुहो’स्